Nke a bụ DualShock PlayStation FC mbipụta maka ndị hụrụ bọọlụ n'anya | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-atụ anya oge ọhụrụ, European Super Cup agafeela ma anyị ga-akwụ ụgwọ maka Klas ọzọ maka Spanish Super Cup nke ga-abata na Camp Nou na August 13 na 23: 00 (oge Spanish). Agbanyeghị, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ịnụ ọkụ n'obi anyị na-eche egwuregwu vidio bọọlụ abụọ bụ isi ga-abata n'oge a, FIFA 18 na Pro Evolution Soccer 2018. Agbanyeghị, dịka ndị na-agba bọọlụ ha chọrọ ezigbo uwe, Ndị ọrụ PlayStation 4 chọkwara akụrụngwa ha.
Afọ a ngwaọrụ -abịa n'ụdị DualShock 4 mbipụta pụrụ iche PlayStation FC. Ka anyị leba anya na iwu a na mbipụta ọzọ pụrụ iche nke Sony na-ezube ịchị ezinụlọ niile n'oge ọnwa Ọgọstị na Septemba na-abịa.
Ihe ọhụrụ a bụ obere mbipụta ga-adị esote September 29, na nke ahụ dabara kpọmkwem na mwepụta nke atụmanya FIFA 18. Otú ọ dị, n'ịhụ mmasị e welitere n'afọ a, anyị ga-eji ohere nke mwepụta nke PES 2018 mee ihe atụ. Ọ bụ eziokwu na a na-ahazi onye njikwa ahụ nke ọma iji cheta oge ahụ na-achọ ibido, ma nakweere agba ndị a ma ama nke Njikọ Njikọ, agbanyeghị, ọ naghị etinye ụdị ọ bụla nke akara ngosi na-ezo aka n'asọmpi asọmpi.
N'aka nke ọzọ, TouchPad nwere mpaghara bọọlụ dọtara n'ụzọ zuru ezu, yana aka nri nwere akara ngosi nke PlayStation FC na aka ekpe ihe ga - abụ «atụmatụ». Iwu ahụ dịkarịrị mmasị, ọ bụ ezie na anyị na-aga n'ihu na-atụ uche agba nke bọtịnụ PS, naanị nyochaa na mbipụta XX Anniversary nke anyị nyochakwara na Actualidad Gadget. Iwu a ga-esokwa mbipụta pụrụ iche Akara Aka 2 ga-esochi ngwungwu njikwa ya na egwuregwu dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » N'anya egwuregwu bọọlụ? Nke a bụ DualShock PlayStation FC mbipụta